Xulashada moodelkii ugu xumaa, jilaa Hollywood ah oo dharka ugu xun xirta | Ragga Stylish
Jilaaga Hollywoodka ee haatan ugu labiska xun
Jared Leto waa mid kamid ah jilayaasha ugu wajiyadda badan Hollywood, marka lagu daro inuu yahay heesaa, agaasime iyo soo saare. Si kastaba ha noqotee, maxaa hadhay talanti qaab dhismeed baa ka maqan. Si aan micno lahayn looma tixgeliyo jilaaga Hollywood ee haatan ugu labiska xun.
Marka xigta, waxaan arki doonaa sababaha qaar ee doorashadan xiisaha leh
1 Jared Leto: Jilaaga Hollywoodka ee haatan ugu labiska xun
2 Qaabka dabiiciga ah ee Jared Leto
Jared Leto: Jilaaga Hollywoodka ee haatan ugu labiska xun
Jilaaga reer Mareykan, heesaa, agaasime iyo soo saare Jared Leto wuxuu leeyahay karti badan wuxuuna ku muujiyey wajiyadiisa kala duwan adduunkuna wuu aqoonsan yahay Laakiin lQaabka uu u labisto jilaagan wejiyada badan ayaa ah mid gaar ah oo aan la aqbali karin.
Jared Leto wuxuu jebiyey xeerar dhowr ah. Waxaa loo arkaa inuu yahay jilaaga maanta ugu labiska xun Hollywood, Leto wuxuu inta badan kasoo muuqdaa roogaga gaduudan iyo wareysiyada oo loo labisanayo sidii inuu hada ka soo baxay suuqa boodada. Badanaa waxay isku daraysaa qaabab kala duwan, qaabab iyo midabyo isku mid ah; natiijada waa la buunbuuniyey oo masiibo ayaa ka dhalan karta.
Leto oo aan jeclayn moodada ayaa muuqata. Intaa waxaa dheer, wuxuu had iyo jeer isku daraa qaabkiisa dabiiciga ah isagoo leh gar iyo timo jilicsan. Dhacdooyinka rasmiga ah, waxay badanaa ku qabataa bohemian, qaab qasan.
Qaabka dabiiciga ah ee Jared Leto
Mid ka mid ah dembiyadii ugu xumaa ee Leto, qaab-caqli-gal ah, ayaa ah inuu had iyo jeer muujiyo miiska. Dareenkaan, wuxuu u eg yahay inuu si aan rasmi aheyn ugu socdo dhacdooyinka u baahan aadaabta. Sidoo kale, wuxuu buunbuuniyaa labiskiisa isagoo isku daraya midabbo badan, qaabab, koofiyado iyo muraayadaha indhaha.
Jilaaga qaabkiisa nolol maalmeedkiisa kama fogayn dhismayaashan sidoo kale. Waxaa badanaa la arkaa isagoo dariiqyada maraya isagoo wata shaatiyado umuuqda inay aad u duqoobeen, surwaal jog ah, sharaabaadyo midabbo kala duwan leh iyo dabcan koofiyado aan u dhigmin wax labiska ka mid ah.
In kasta oo dhadhankiisu aad u xun yahay xagga moodada, haddana jilaagan wejiyada badan ayaa guulo laga gaadhay abaalmarinno kala duwan. Dhawaan waxaa lagu arkay munaasabado rasmi ah oo aad u nadaafad badan oo nidaam badan. In kasta oo loo tixgeliyo atooraha ugu labiska xun Hollywood-ka maanta, waxaa laga yaabaa inuu bilaabayo isbadal wanaagsan oo dhanka moodada iyo qaabkaba ah.
Marka laga soo tago guushiisa ama khaladaadkiisa dhanka moodada ah, waxa aan la inkiri karin ayaa ah in Jared Leto uu leeyahay qaab u gaar ah oo aan la mid ahayn. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii qaabkani u rogi doono si togan ama haddii uu ku noqon doono bilowgiisii ​​musiibada ahaa.
Ilaha Sawirka: As.com / GQ
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Jilaaga Hollywoodka ee haatan ugu labiska xun
Saddex nooc oo sharaabaadyo iyo kabo
Waa sidee ninki qarniga XNUMXaad